Uluhlu oluhle kakhulu lwe-ICO 2021 | Uluhlu oluphezulu lwee-ICO Izilumkiso kunye noPhononongo | Uluhlu lweNkonzo ye-ICO
Uluhlu lwe-ICO kwi-Intanethi- Inombolo ye-1 ICO Platform ku-2021
Uluhlu lwe-ICO kwi-Intanethi yenye yeefayile ze- ezona ndawo zintlu ze-2021 ICO ezihlala zihlaziya malunga ne-ICO ezilungileyo zokutyala imali. Ufuna ukungenisa i-ICO yakho kwiqonga lethu ucofe i Ngenisa iqhosha le-ICO ngezantsi:
Eyona ICO ilungileyo yokutyala imali kwi-2021-Uluhlu oluphezulu lwe-ICO 2021
I-Quarashi igunyazisa abokuqala ukuba babelwe bonke kwiqonga elinye elijolise kuyo: Ingxoxo yabucala, iTshintshiselwano oluSasazekileyo, IDO Launchpad, iBlockchain Interfaced Multi Crypto wallet. Agasti 1, 2021 Oktobha 31, 2021 9.9
ICoinjoss ijolise ekunikezeleni abasebenzisi ngamava angenamthungo ekulawuleni ii-cryptocurrensets zabo. I-Coinjoss yindawo yonke ecosystem eqala ngeqonga layo lokutshintshiselana ngokukhawuleza, egxile kukusebenziseka ngokulula kubasebenzisi ukuze bathengise ii-cryptocurrencies zabo ngezona zinga liphezulu kwintengiso. Oktobha 15, 2021 Novemba 30, 2021 9.6
Ithokheni yobubele yenzelwe ukulinganisa ukuthengwa kunye nokuthengiswa kwedayimane kwi-intanethi. Olu luphawu lwembali! Injongo yokudala lo mqondiso kukuba idayimani yekohinoor ayisiqwenga nje emhlabeni. Ngapha koko, zininzi zazo ngohlobo lweempawu emhlabeni. Kwaye bonke abantu banokugcina le dayimani ixabisekileyo kwisipaji sabo. Oktobha 20, 2021 Disemba 5, 2021 9.6
Ingeniso Coin (RVC) abanini baxhasa iinkampani zobuchwephetsha ukukhulisa ukuthengisa, ukuthengisa, kunye nemisebenzi yentlalo. Iziqalo ezifumana inkxaso-mali zabela ukuya kuthi ga kwi-10% yengeniso kuthengiso olucwangcisiweyo lweRVC kwimarike, ukunciphisa ukubonelela kunye nokunyuka kwamaxabiso. Oktobha 15, 2021 Novemba 30, 2021 9.8
I-BERTINITY yinto ephazamisayo kunye ne-KYC yezemali ye-blockchain ecosystem. IBERTINITY ecosystem iqukethe iindawo eziphambili ezi-5, kubandakanya isango lokuhlawula i-crypto, utshintshiselwano oluphakathi, iphetshana lokuqalisa i-ICO, indawo yentengiso yethokheni yokhuseleko lwehlabathi kunye nengqekembe yemveli. Oktobha 20, 2021 Novemba 20, 2021 9.2
I-Dhabicoin iseti yeeasethi zedijithali zokumanyanisa iinethiwekhi ezininzi kwindawo enye yedijithali eya kuthi ivumele abasebenzisi ukuba banxibelelane, bafunde, benze iintlawulo, kwaye benze ezinye izinto ezahlukeneyo. Iinjongo zayo kukonyusa uqoqosho lwe-UAE kunye nokwenza iinguqu kwiimarike zehlabathi. Septemba 24, 2021 Oktobha 25, 2021 9.6
I-Veritise ibonelela ngesiqinisekiso, isazisi, ukuqokelela idatha kunye neenkonzo zohlalutyo lweenkampani nabantu. Isentloko kwezi zinto zisebenzayo yi-Veritise Enterprise-grade blockchain yesakhono sayo sokuhambisa kunye nokugcina idatha ngokukhuselekileyo nangokungaguqukiyo. Septemba 3, 2021 Disemba 31, 2021 9.8
IFinancio lutshintshiselwano olusemthethweni olwenziwa kwiBinance Smart Chain, enezinto ezininzi eziza kukuvumela ukuba uzuze umvuzo ophezulu, we-crypto. Septemba 15, 2021 Oktobha 30, 2021 9.5
Iqonga lenkxaso mali elisasazekileyo (esisihlwele), esikhupha igalelo labatyali mali kwiprojekthi exhaswa ngemali kwintlawulo elungiselelwe kwangaphambili yokugqitywa kweMilestone. Julayi 24, 2021 Oktobha 31, 2021 9.1
Isiseko seHlabathi X
Umhlaba X Isiseko siqhutywa luluntu, siselubala kwaye sinomqondiso olungileyo. Yaziswa ngokusisigxina kwaye ngokukhawuleza iBinance Smart Chain BSC. Sinceda nge-10% yokuThengiswa kweMpawu kwiiprojekthi zethu ezintathu zesisa. Oktobha 6, 2021 January 6, 2021 9.0
UKai Ken inu yindawo eqhutywa luluntu, ithokheni yeDeFi. Kwintengiso nganye, imisebenzi emithathu elula iyenzeka: Ukutsha, ukufunyanwa kwe-LP, kunye nokukhula koPhuculo. Ngale modeli yethokheni, iprojekthi iyaxhamla iyonke ngentengiselwano enye. Intengiselwano Kai ken zixhamla BONKE abanini. Juni 2, 2021 Agasti 31, 2021 9.5
I-ICO Okratech iya kuba liqonga elifanayo njengeFreelancer.com kunye ne-Upwork.com kodwa iya kwamkela imali yedatha. I-Ortcoin izakwenza iqonga lemisebenzi ye-blockchain elinceda abathengi kunye nabasebenza ngokukhululekileyo ukunxibelelana, ukubonelela ngokuthengiselana okusebenzayo kunye nokukhuseleka okunamandla ngezivumelwano ezifanelekileyo-naphi na apho uhlala khona. Agasti 2, 2021 Novemba 30, 2021 8.4
ICaizcoin yindawo yokuqala yamaSilamsi eyabelweyo kunye ne-ecosystem enamandla enceda ukuhambisa imali phakathi kwabantu kwihlabathi liphela ngokuhambelana nemithetho yezeMali yamaSilamsi. Juni 1, 2021 Oktobha 31, 2021 9.6
I-Epsilon iqhutywa luluntu, ikhuselekile esidlangalaleni, kwaye ivula injini yokukhangela. I-Epsilon ine-wallet yayo eyabelwe amagunya kunye notshintshiselwano olusemthethweni. Ibaleka kwiqonga leBinance Smart Chain kwaye ilithokheni ye-BEP-20. Septemba 4, 2021 Disemba 13, 2021 9.5
I-EMCODEX imele: UkuTshintshiselana ngeZinto ngokuTshintshisanayo. Oko kubizwa ngokuba yimarike yorhwebo ayikho enye into ngaphandle kwentengiso apho kufanelekile ukuba kuthengiswe iimpahla. Kwizoqoqosho, igama elithi yorhwebo yinto elungileyo esetyenziswayo kurhwebo olunokutshintshana nezinye iimpahla zoluhlobo lunye. Ngamana 18, 2021 Agasti 28, 2021 9.2
Sibamba iikonsathi ezinkulu zamagcisa aphezulu, kumabala emidlalo kunye nokusasaza kwi-Intanethi kubaphulaphuli abazizigidi kwihlabathi liphela. Ukuxhobisa ishishini lomculo ukuba lenze imijelo yengeniso entsha kwintengiso yethu ekwi-Intanethi nakwi-cryptocurrency. Julayi 28, 2021 Septemba 30, 2021 9.5
Imivuzo yeNexxus ibonelela ngesisombululo sentengiso esisebenzisanayo esiya kuluntu luphela. Inceda imibutho yesisa yasekuhlaleni kunye nemibutho engenzi nzuzo ukuxhasa ngezizathu zabo ezibalulekileyo kwezentlalo ngengxowa-mali engagungqiyo ebeka imali kwiakhawunti yabo yebhanki veki nganye kubathengi abagcina bethenga. January 16, 2020 January 22, 2020 7.8
2local izibophelele kuphuculo nakwishishini elinozinzo ngononophelo lwendalo kunye nemozulu, umsebenzi olungileyo, kunye nokukhula koqoqosho. Ngale nto, i-2local ifuna ukufaka igalelo kubambiswano olutsha lwehlabathi oluyimfuneko ekufezekiseni iinjongo ze-UN. Ukongeza, isenzo siyafuneka kuye wonke umntu! Oktobha 17, 2019 Disemba 31, 2019 9.9
I-Encores imalunga nokutshintsha indlela yengeniso-yokusasazeka kwengqondo kunye nokusasaza kwakhona izibonelelo phakathi kwabasebenzisi ngokubavuza ngokubajonga i-Intanethi okanye ukwenza eminye imisebenzi elula, enje ngokuncokola, ukuthengisa, njl. Oktobha 1, 2019 Ngamana 31, 2019 7.5
Ukwazisa iRobinhood. Ukubeka ukuthembela emva ekungcakazeni. Septemba 14, 2019 Februwari 2, 2020 8.9
I-Flas Exchange liqonga lokurhweba elibanzi elinikezela ngeendlela ezahlukeneyo zeasethi yedijithali. Njengeqonga elikhuselekileyo, elithembekileyo neliphambili lokuthengisa iiasethi ezenzelwe urhwebo lobungcali, iFlas Exchange iya kuphuhlisa uluhlu lweempawu eziphambili ukuhlangabezana neemfuno ezizodwa nezintsonkothileyo zoochwephesha kunye namaziko. Novemba 8, 2019 Februwari 9, 2020 8.3
I-GRAYLL isasazwa ngeTekhnoloji yeLedger, i-AI kunye nokuFunda ngomatshini kusetyenziswa kwinkqubo yezemali ye-algorithmic eyenza inzuzo ebonakalayo ngokuzenzekelayo, ifikeleleke ngokusetyenziswa komsebenzisi oselula kunye neWebhu. Sijolise kwii-asethi zedijithali nakwiimarike zeeasethi ezinophawu. Iinkqubo zinokusetyenziswa kuyo nayiphi na into, umzekelo izinto zorhwebo, ubugcisa, ukuthengiswa kwezindlu, imeko yemozulu, idatha yemikhwa yeendaba zentlalo njalo njalo. Julayi 1, 2019 Februwari 17, 2020 9.1
I-HiveNet iza kubonelela ngesisombululo setekhnoloji yokusebenzisa la maxesha ekhompyuter angasebenziyo ngokwakha uthungelwano olusasazwayo lwekhompyuter yelifu. Oku kuyakwenza ukuba abanini beekhompyuter benze inzuzo kumaxesha angasebenziyo eekhompyuter zabo Septemba 24, 2019 Novemba 23, 2019 7.9
I-Mindsync liqonga kunye noluntu lwehlabathi lwabaphuhlisi bokufunda ngomatshini, izazinzulu zedatha kunye nokufaka iingcali ze-AI. Olu luntu luya kuba nakho ukusebenzisana kunye nokuthatha inxaxheba kukhuphiswano phakathi kwabantu kunye namaqela ukusombulula iingxaki ezahlukeneyo. Matshi 1, 2019 Aprili 30, 2021 10.8
I-Pawtocol LLC, inkampani enamatyala eDelaware ("Pawtocol", "thina", "yethu", "us") ijonge ukuthatha ishishini lokhathalelo lwezilwanyana kwinqanaba le-blockchain ngokuphuhlisa iqonga elinoqoqosho olujolise kwizilwanyana nakwindalo. Eli phepha lichaza umbono wethu kunye nefilosofi esekwe kwiPawtocol kunye nokuba kutheni le projekthi siyisa kwintengiso, kunye nenkqubela phambili yethu ukuza kuthi ga ngoku nokuba kutheni siliqela elifanelekileyo ukuba siphumeze. Julayi 1, 2018 Disemba 31, 2018 7.9
ISynchroBit ™ yenye yeeprojekthi eziphambili zemodyuli yezemali yeSynchroSphere® ecosystem, ebonelela ngomqolo woqoqosho kwezinye iiprojekthi kunye neemodyuli ze-ikhosistim. Iqonga liza kudityaniswa ngokupheleleyo namanye amaqonga ezemali eSynchroSphere® ukwenza amava omthengi angenamthungo kunye nokubonelela abasebenzisi ngemveliso echanekileyo, echanekileyo, nekhuselekileyo yezoshishino ngokusekwe kwitekhnoloji ye-blockchain nakwii-cryptocurrensets. Agasti 1, 2019 Disemba 28, 2019 8.2
Izicwangciso zeTecraCoin zophuhliso loTyalo-mali lweTecra kwixa elizayo. I-TecraCoin inelungelo lokutshintsha ezi zicwangciso okanye uyeke ukuzizalisekisa ngokokubona kwayo. January 17, 2019 January 16, 2020 7.2
Iprojekthi yeCoinCasso sisisombululo esipheleleyo nesedemokhrasi esenzelwe abantu. Umbono wethu wahluke ngokupheleleyo kuba sifuna ukuba uluntu lukwazi ukuthatha isigqibo kunye nefuthe kuphuhliso lotshintshiselwano lwethu kunye nomzi mveliso uphela. Kungenxa yoko le nto sinika abasebenzisi bethu ithuba lokuba ngabanini bobambiswano beprojekthi yeCoinCasso. Oktobha 21, 2018 Disemba 31, 2019 8.2
Iprojekthi yeKaruschain ijolise ekuchukumiseni uninzi lwezinto eziphambili nezikhutshiweyo zentsimbi exabisekileyo. Iqonga laseKaruschain liyaphuhliswa ukunciphisa ngokuthe ngqo imicimbi kunye nemiceli mngeni ejongene nabo bonke abathathi-nxaxheba kuthengiso lwesinyithi oluxabisekileyo. January 14, 2020 Februwari 14, 2020 7.2
I-Level01 li-1 Peer to Peer (P2P) yeHlabathi yokuTshintshiselana ngobuGcisa beArtificial Intelligence (AI) yeTekhnoloji yoThelekiso loRhwebo kunye nokuHlaliswa kwiBlockchain. I-Level01 iphakamisa ibhloko ye-blockchain kunye netekhnoloji ye-cryptocur lwemali, ukwenza ezinye izinto (ukhetho) lokutshintshiselana kunye neqonga lokurhweba apho urhwebo lwezezimali kwi-forex, isitokhwe, izinto zorhwebo kunye ne-cryptocurrensets zinokuqhutywa ngoontanga, ngaphandle kwesidingo somthengisi ophakathi. Julayi 1, 2018 Disemba 31, 2018 9.1
I-SaTT luphawu olusebenzayo olusekwe kwitekhnoloji ye-blockchain evumela ukutshintshiselana ngentengiso kunye nentlawulo yabaphulaphuli. I-SaTT ilawulwa yiKhontrakthi eSmart edwelisa izibonelelo zentengiso kunye nayo yonke idatha egcinwe ngokukhuselekileyo kwi-Ethereum blockchain. Isivumelwano seSmart simisela iimeko zokuthatha inxaxheba kumaphulo, siqinisekisa impumelelo, kwaye siqinisekisa ugcino lokugqibela. Ngamana 1, 2018 Disemba 31, 2020 8.3
I-Gath3r yamkela indlela entsha kwi-browser yokukhangela kunye nokwaziswa kwengqekembe yemveli ehambelanayo kunye nokumbiwa kwemigodi. Ingqekembe ye-GTH isebenza kakuhle kuzo zombini izikhangeli kunye neeapps, kwaye ayinayo imicimbi ye-UI, ke ngoku ivumela iingqekembe ezintsha nezikhoyo ukuba zisebenzise i-hasathrate yeGath3r. January 9, 2020 January 11, 2020 6.3
Isisombululo seBethereum sisebenzisa itekhnoloji yeBlockchain ukuqinisekisa elona xabiso likhuselekileyo nokubheja. Akukho mntu uphakathi obandakanyekayo: Abadlali benza ukubheja, baseta imigaqo, kwaye babonelele ngobutyala bokufezekisa intlawulo. Izivumelwano zeSmart zikhusela imali kwaye zisasaza iimali eziphumeleleyo ngokusekwe kwiimeko zokubheja kunye neziphumo. Oktobha 1, 2018 Disemba 31, 2018 8.4
IBNIF CINEMADROM -Le yiNethiwekhi yeHlabathi yeBlockchain yeeCinematographer ezizimeleyo, eyakhelwe kwimigaqo-nkqubo yezobuchwepheshe, kunye nemali yokusebenzisana phakathi kwabo bonke abathathi-nxaxheba kwimveliso yefilimu, ababhali, abavelisi, iingcali, abatyali zimali kunye nababukeli. Kwinqanaba layo, i-IBNIF CINEMADROM isebenzisa iteknoloji ye-blockchain Februwari 3, 2020 Aprili 30, 2020 6.9
I-MyTVchain liqonga le-TV yokuqala yewebhu enikezelwe kwiiklabhu zemidlalo kunye nabadlali, kwaye ngoku babhengeza ukuvulwa kwejelo lezeMidlalo lewebhu le-Sport En France, umabonwakude we-Sports Movement. Eli jelo lasungulwa linyathelo le-French National Olimpiki kunye neKomiti yezeMidlalo (i-CNOSF), kwaye yazinikezela ekukhuthazeni lonke uqeqesho, yonke imibutho kunye neeklabhu zabo. Februwari 29, 2020 Matshi 27, 2020 6.1
I-BILLCRYPT pl yinkqubo yokudibanisa eyabelwe umhlaba wonke kwiiofisi zeBlockchain-Representative office (BR). Isiseko esinye semisebenzi emininzi esidibanisa ii-ofisi ezimele iBlockchain ngohlobo lwezicelo ezisasazwayo kwi-blockchain (DApp). Iqonga elahlukileyo elidibanisa zonke izibonelelo zehlabathi lokwenyani kunye nendawo ebonakalayo, i-Intanethi eqhelekileyo kunye nebhloko. Julayi 3, 2019 Aprili 23, 2020 7.4
Yintoni uluhlu lwe-ICO kwi-Intanethi?
Uluhlu lwe-ICO kwi-Intanethi lolona luntu lukhulu apho abantu beza kudwelisa ii-ICOs zabo ukusukela nge2018, sihlaziya ulwazi malunga nee-ICO zamva nje ezikhoyo kwimarike. Zininzi iiwebhusayithi ezinoluhlu lwe-ICO ezikhoyo kwi-intanethi kodwa ayizizo zonke ezikhuselekileyo nezithembekileyo zokutyala imali kuba uninzi lwazo azihlaziywa rhoqo.
Abo batyalomali banomdla wokutyala imali kwii-ICOs. Banokujonga iireyithingi ze-ICO kwiwebhusayithi yethu kwaye batyale imali kuba iya kubanceda bakhangele ezona ziSebenzayo, ii-ICO zangaphambili kunye nezizayo.
I-ICO, okanye i-Initial Coin Offering, ngamanye amaxesha ikwabizwa ngokuba "kukuthengisa ngethokheni" okanye "umnikelo wokuqala wethokheni", ngumkhwa wokubuyiselwa kwemali kwiiprojekthi ze-blockchain, apho i-cryptocurrency okanye ithokheni inikezelwa kubatyali mali bangaphambi kokuba kudweliswe kwindawo yentengiso ebanzi , njengotshintshiselwano.
Kucetyiswa ukuba kwenziwe uphando olubanzi malunga neprojekthi ngaphambi kokutyala imali. Oku kubandakanya ukufunda iphepha elimhlophe, ukusebenza nokuba i-ICO ibonelela ngexabiso lokwenyani kunye nokuphanda iqela ngokweenkcukacha.
Nantsi indlela onokuthi uthathe inxaxheba ngayo kwi-ICO:
Yiba ngumnini wedijithali ofanelekileyo owamkelwa yi-ICO njengotyalo mali.
Qiniseka ukuba isipaji semali yedijithali siyahambelana nethokheni ye-ICO.
Jonga kathathu idilesi yedipozithi kwimithombo esemthethweni.
Yintoni i-ICO Soft Cap?
I-ICO iyiphumezile injongo yayo yakufika ikepusi yayo ethambileyo. Ikepusi ethambileyo sisixa esincinci esifunekayo ukuze iprojekthi iqhubele phambili.
Yintoni i-ICO Hard Cap?
Uninzi lwe-ICOs luya kuba ne-cap enzima, elilelona xabiso liphezulu baya kulamkela kutyalo-mali. Ukuba i-ICO iyasilela ukufikelela kwikepusi yayo ethambileyo, uninzi lwee-ICO ziya kubuyisa imali kubatyali mali.
Zithini iiMpawu ze-ICO?
Iimpawu zingachazwa njengezinto ze-crypto ezinikezelwe kwinkampani exhasa ngemali iprojekthi nge-ICOs, enokuba sisixhobo sokuhlawula (iyunithi yemali) kuphela kwinkqubo yendalo enikezela izinto ezifanayo njengeengqekembe, kodwa umniniyo unamalungelo amanye kwinethiwekhi , njengelungelo lokuvota, ilungelo kwisahlulo, ilungelo kwinxalenye yengeniso kunye nabanye. Iimpawu zenziwe njengezivumelwano "ezihlakaniphile" ezisekwe kwinethiwekhi ye-Ethereum okanye ye-Wave blockchain. Iithokheni zinokwamkelwa njengezixhobo zemali okanye imveliso yorhwebo (okanye iinkonzo) ezinokuthi zisetyenziswe ngumnini weethokheni (izixhobo), kuxhomekeke kwiimpawu ze-cryptocurrency.
Yintoni i-ICO Whitepaper?
I-ICO Whitepaper luxwebhu olukhutshwe ngumbutho / yinkampani ekhupha amathokheni ukuze kunyuswe imali yokuxhasa iprojekthi ethile. Akukho mxholo uchaziweyo ngokusemthethweni kunye neemeko ekufuneka umntu ahlangane nazo abe mhlophe. Olu xwebhu luhlala luqulathe ulwazi malunga nenkqubo yokukhutshwa kweethokheni, ulwazi malunga neprojekthi eza kuphunyezwa, kunye neqela elingasemva kweprojekthi.
Usebenza njani umnikelo wokuqala wengqekembe (ICO)?
I-ICO iqala ngohlobo oluthile lwesiteyitimenti, esidla ngokubizwa ngokuba liphepha elimhlophe elichaza iinkcukacha zeprojekthi, isicwangciso seprojekthi, uhlahlo-lwabiwo mali kunye neenjongo kunye neengxoxo ezithile malunga nendlela eziza kusasazwa ngayo iingqekembe okanye amathokheni. (Ngokwesiqhelo iithokheni zinikezelwa ukumela ubunini beprojekthi okanye umbutho ozimeleyo ozimeleyo, kodwa iingqekembe zihlala ziipropathi zemali.)
Uninzi lwee-ICO lumisela inani leethokheni okanye iingqekembe ezinikezelwe ngaphambi kokuthengiswa. Abatyalomali abathenga kwangoko banokunikwa imigaqo ekhethekileyo ngokuhlawula ixabiso elisezantsi ngengqekembe nganye. Kodwa amaxabiso anokutshintsha, kwaye ukuba abantu abaninzi bathenga, unokuphela uneethokheni ezimbalwa.
Ezinye ii-ICO zinenjongo ethile yokunyusa ingxowa kwaye zinokugcina ixabiso lizinzile kuthengiso lwazo. Abanye bagcina ubonelelo luhleli kwaye bahlengahlengise ixabiso ngokusekwe kwimfuno, inyuka kangangoko kunokwenzeka kwaye kukwakho nezo zibonelela ngokuhanjiswa okunamandla xa kudalwa ingqekembe entsha xa umntu eyithenga.
Ii-ICO ezininzi zisungulwa ngokuzimeleyo, zilawulwa ngumzimba okhuphayo kwiwebhusayithi okanye kwiqonga lawo. Oku kwenzeke ngenxa yokuba izithembiso ezinokuthenjwa zihlala ziqhutywa yinkonzo yokutshintshiselana okanye yentengiselwano enokuvumela abatyali mali amanyathelo athile okhuseleko ngokuchasene nabakhwabanisi.
Umahluko omkhulu phakathi kwe-ICO kunye ne-IPO
Umrhumo wokuqala woluntu (i-IPO) yinkqubo efanayo ne-ICO apho umtyali-mali efumana izabelo kubunini benkampani. Oku kuyaphikisana ne-ICO, apho iithokheni zorhwebo ezithengwe ngabaxhasi zinokongeza ixabiso ukuba ishishini lisebenza kakuhle.
Kwii-ICO, abatyali mali bathenga ii-cryptocurrensets ezintsha ngenjongo yokwenza inzuzo xa ixabiso lonyuka. Oku kuyafana nomntu ofumana inzuzo xa isitokhwe abasithengayo kwintengiso yesitokhwe sikhuphuka. I-ICO yahlukile ekuthengeni izabelo kwimarike yemasheya kuba xa utyala imali kwiithokheni ezintsha, awunakho ukwabelana ngobunini benkampani.
Kutheni le nto ukubuyiselwa kwemali kwi-ICO kudumile?
I-ICO yinguqulelo yedijithali ye-crypto yokubuyisa imali. Isetyenziswe ngokufanelekileyo ekuxhaseni i-cryptocurrensets, ethi kule mihla iphumelele kakhulu kwaye inyuse isixa esikhulu semali esingaze sikwenze ngokufumana isixa semali esiqhelekileyo. Nayi eminye yemizekelo yeeprojekthi ze-ICO zokubuyisa izixa eziphumeleleyo: I-Stratis, i-Ethereum, i-Iota, iViberate kunye ne-Edgeless
Uyenza njani i-ICO?
Iinkampani ze-Crypto-currency ezinqwenela ukunyusa imali nge-ICO kufuneka zibonelele ngolwazi, kubandakanya nenkcazo yeprojekthi, injongo yeprojekthi, iimfuno zotyalo-mali, icandelo lamathokheni aya kugcinwa yinkampani, ixesha Iprojekthi ye-ICO kunye nohlobo lwemali ebonakalayo yamkelwe yiprojekthi.
Ngaba kufanelekile ukuthatha inxaxheba kwi-ICO?
Into ephambili kukuba uqonde ukuba utyalomali imali kwimbono yomntu, engenakufaneleka. Kwelinye icala, inqanaba lemali yedijithali liyenyuka ngoku. Le yintsimi ethembisayo yokufumana umvuzo omkhulu, kwaye ukuba awufuni kuphoswa lithuba lokuya phambili namhlanje.
Utyalomali lwe-ICO lunezinto zombini eziluncedo kunye nezinto ezingalunganga xa kuthelekiswa notyalo mali esele zidwelisiwe kwi-cryptocurrency. Ke, abatyali mali abanobuchule, abathenga imali entsha yedijithali kwi-ICO ngokukhawuleza, banokuba nethemba lokunyuka kwamaxabiso. Umzekelo, abo batyale imali kwi-Ethereum ICO kwi-2014 benze inzuzo enkulu. Kwiintsuku ezingama-42, i-18 yezigidi zeedola zaseMelika yayityaliwe. U-Ether wathengiswa kwi-ICO ngeesenti ezingama-30. Ngaphandle kohlu lokuqala kwi-stock exchange, abatyali-mali babonwabile malunga neepesenti ezilikhulu zokunyuka kwexabiso. Namhlanje i-cryptocurrency ye-Ethereum ye-Ethereum yeyona Coin yesithathu yomeleleyo kwimarike kwaye ngoku ithengiswa malunga ne- $ 100.
Izibonelelo zoTyalo-mali lwe-ICO
Ii-ICO zithembisa ngakumbi amathuba aphezulu okuphumelela
Nabani na ophanda ii-ICOs uya kufunda malunga nezicelo ezininzi ezinokubakho kwitekhnoloji yeBlockchain
Abatyalomali banempembelelo kuyilo lobume beshishini lwe-crypto
Ukuthatha inxaxheba kwii-ICO ngokuthe ngqo
Izinto ezingeloncedo kutyalo-mali lwe-ICO
Amatyala amaninzi obuqhetseba enza ukuba ukuthatha inxaxheba kwii-ICO kube semngciphekweni kakhulu
Isipaji sinyanzelekile ukuba sithathe inxaxheba
Uphando lwangaphambili luyacetyiswa ngamandla, ludinga ixesha elininzi
Kwimarike yebhere eqhubekayo, kunzima ngakumbi kwi-Startups ukuzimisela
Nantsi indlela onokutyala ngayo imali kwi-ICO:
Ukutyala imali kwi-ICO, kufuneka uskrole kwiwebhusayithi yethu ukufumana iiprojekthi ezinokubakho ezithembisayo ezifuna inkxaso-mali. Nje ukuba ufumane uluhlu lweeprojekthi apho ungabona khona utyalomali lwakho, kuya kufuneka uye kwiwebhusayithi yabo ukuze uthenge amathokheni.
Ngenxa yokuba i-ICO ibanjelwe kwii-cryptocurrensets, hayi kwii-Fiat currencies, kuyimfuneko ukutshintshiselana ngemali nge-imali yedatha (ikakhulu i-Etherium).
Dlulisela imali yedijithali kwiprojekthi kwaye ufumane ubungqina bokuthatha inxaxheba
Ukufumana iingqekembe zeprojekthi kwisipaji se-crypto
Ukurhoxiswa kweemali zemali kwi-crypto exchange
Xa amaxabiso alungele utyalomali efikelelwe, ukuthengiswa kunye nokulungiswa kwesiphumo semali kuyenziwa
Amanqanaba okuthengisa e-ICO abandakanya inkqubo ejonga kumcimbi wokukhulisa imali kunye xa iiasethi zedijithali zikhutshwa kwintengiso njengeebhlokhi ezifanayo nezabelo ezaziwa kakhulu njengeethokheni ezinikezelwa ngexabiso lesaphulelo elinokutshintshelwa kuluhlu lwe-cryptocurrency ngumtyali mali wokuqala ngexesha lesigaba sokuqala seprojekthi ethile. Sinikezela nge Uluhlu oluphezulu lwe-ico. Nazi izigaba zokuthengisa ze-ICO ezintathu:
Isigaba I UKUTHENGISWA KWABucala
Isigaba II INKULUMBUSO
Isigaba III UKUTHENGISWA KWESIXUKU
Nangona kunjalo, akukho seto yemithetho iyilwayo egqiba ubume bokukhula kwe-crypto ico eshushu. Kuqala, ngexesha lesigaba sokuqala, ukuthengiswa kwangaphambili kunye nokuthengiswa kwangasese kuyabhengezwa kuphela emva koko iSigaba II siqala ukutshintshisa uluhlu oluphambili kwaye emva koko kuza iSigaba se-III apho amathokheni akulungele ukuthengwa luluntu ngokwenza imali eninzi.
Uluhlu oluPhambili lwe-ICO:
Sine-a Uluhlu oluzayo lwe-ICO eza kusebenza kungekudala. Sinecandelo elahlukileyo lokubonisa ii-ICOs zamva nje.
Uluhlu olusebenzayo lwe-ICO:
Ukufumana olona luhlu lubalaseleyo lwee-ICOs ezisebenzayo, awudingi ukuya kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo ngoku. Sinikezela ngoluhlu oluhlaziywa rhoqo.
Uluhlu langaphambi kwe-ICO:
I-Pre-ICOs zitshiphu kwaye zikwindlela elungileyo yokufumana inzuzo ngokukhawuleza. Kule mihla, Ziyaziwa phakathi kwabatyali mali ngokufumana ngaphezulu. Ke jonga eyethu Uluhlu langaphambi kwe-ICO namhlanje.
Dwelisa i-ICO yakho namhlanje kwiwebhusayithi yethu kwaye sifikelela amawaka abatyali mali kwihlabathi liphela kwaye, ngoku sibonelela ngokukhawuleza Inkonzo ye-KYC ye-ICO. Gcwalisa iifom zethu zoqhakamshelwano kwaye siya kuqhagamshelana nawe kwiiyure ezingama-24 ezizayo.